Ny mpandeha no mizaka ny vokany… : ny taxi-be tsy manara-dalàna, ny polisy manararaotra | NewsMada
Ny mpandeha no mizaka ny vokany… : ny taxi-be tsy manara-dalàna, ny polisy manararaotra
Nanomboka tamin’ny 7 ora sy 30 mn, omaly, tsy afa-niasa intsony ny taxibe mampitohy an’Ambatofotsy sy Cnaps Anosy, Mandrimena sy 67 ha na Analakely sy Mandrimena. Ireo mpamily sy ny mpanampy azy minia mbola miasa azon’ny fandrahonana samihafa ka natahotra ary lasa nanatitra fiara nody no niafarany. Misy ny manala ny takelaka milaza ny zotra iasany ary tsy mijanona ela rehefa manala olona ialana amin’ny savorovoro. Ho an’ireo taxibe hihazo an’Ambatofotsy mbola afa-niasa, tsy mandalo eo Andoharanofotsy intsony raha mbola hiverina hitondra olona miakatra aty Anosy fa manitsy amin’ny By-Pass ny lalana. Anjatony ny olona no niandry vasoka ny taxi-be handeha hiasa na hianatra na manan-draharaha aty Anosy sy ny manodidina. Ny sasany nitambatra nandeha fiarakaretsaka.
Nitondra sora-baventy ireo mpamily sy ny mpanampy azy mangataka ny hanesorana ny Cellule d’ntervention rapide (CIR) fa mampijaly ny afitsony amin’ny mpitatitra. Ety Ankadimbahoaka ny fotoana nifanomezana amin’ny kaoperativa rehetra mpitatitra olona. Niatrana teny an-toerana avy hatrany ny Emmo/Reg taorian’izay. « Mampitaraina ireo mpitatitra ny fanararaotana ataon’ny polisy sy zandary mitaingina môtô mila vaniny amin’ny zavatra tsy misy fahadisoana akory », hoy ny mpamily amin’ny zotra 137 mampitohy an’i Mandrimena sy Analakely, omaly. Tsy latsaky ny 70 000 Ar ny lamandy aloan’ny mpamily vao azo ny « carte grise » sy ny taratasy fahazoana mamily fiara. Alaina eny amin’ny minisiteran’ny Fitaterana, Anosy, ny taratasy andoavana ny vola eny amin’ny kaominina Anosizato. Entina miverina, eny Anosy indray ny rosia nanefana ny vola vao azo ny taratasy rehetra. Raha miverina intelo ny fahadisoana, tsy afaka miasa mamily fiarakodia ilay mpamily mandritra ny herintaona.
« Manao jadona ny fanjakana », hoy ny mpitatitra
Mahatsapa izy ireo fa manao jadona ny fitondrana ka lasa fakam-bola ny mpitatitra izay mamelona ankohonana ihany koa. Raha nitokona ny zotra amin’ny kaoperativa 137, 187, 172, F, Kofiavo, Tsiferana, Komafila, Kompima, Kofia, niasa toy ny isan’andro kosa ny zotra mianavaratra rehetra. Mbola tsy nahazo baiko ny hitokona izahay, hoy ny mpamily amin’ny kaoperativa 165 ka manohy ny asa aloha hatramin’izao.
Fa nisy lehilahy iray voasambotry ny Emmo/Reg, omaly nandritra ity fihetsiketsehana ity satria nanararaotra nanendaka sy nampihatra herisetra tamin’ireo taxi-be sasany niasa.
« Samy tsy manara-dalàna avokoa na ny mpamily ny taxibe izay mihodina an-dalana sy manary ny mpandeha eny an-dalana tsy tonga any amin’ny farany sy ny mpitandro filaminana manararaotra ny mpitatitra », hoy ny mponina iray mipetraka eny Andoharanofotsy. Vokany, ny vahoaka no mizaka izany savorovoro izany.
Naato aloha ny CIR
Nidina teny Ankadimbahoaka ny tale iray ao minisiteran’ny Fitaterana, nilaza fa tsy hitaran’ny savorovoro sy ny fahasahiranan’ny mpampiasa taxi-be, haato vonjimaika aloha ny asan’ny CIR. Tsy hofoanana akory fa haato satria ny fanjakana mampihatra lalàna ka tokony hanaraka izany ny rehetra indrindra ny mpitatitra rehetra. Iaraha-mahalala fa betsaka ny mpamily sy ny mpanampy azy manenjika « versement » fotsiny, ka lasa tsy manaja lalàna rehefa miasa.
Vonjy A. sy Jean Claude